Mahara Mahara, Gum & Lozenges - 802Quits
Vermonters NDINODA KUREGA Wana Rubatsiro Kurega Mahara Mahara, Gum & Lozenges
ZVEMAHARA ZVEMAHARA, GUMU & ZVIMWE
Yese yekurega kuyedza mukana wekuziva izvo zvinonyanya kukunakira. Kunyangwe iwe uchirega wega kana kushanda neQuit Coach, uchishandisa kurega mishonga, inozivikanwawo seinikotini kutsiva kurapa (NRT), inowedzera mikana yako yekubudirira kurega. Muchokwadi, mikana yako yekurega inowedzerwa zvakanyanya kana iwe:
Sanganisa kurega mishonga neyakagadziriswa kurega kudzidzisa rubatsiro kubva ku Vermont Regedza Partner or Regedza Rubatsiro nefoni
Sanganisa nicotine kutsiva kurapwa nekushandisa 2 mafomu ekurega mishonga panguva imwe chete. Kubatanidza refu-kuita (chigamba) uye nekukurumidza-kuita (chingamu kana lozenge) nicotine kutsiva kurapa kunokurudzirwa mukana wakakura wekurega. Kudzidza nezve Kubatanidza Kurega Mishonga pazasi.
Kana usati wabudirira neimwe nzira munguva yakapfuura, unogona kuita zvakanaka kuyedza imwe.
Shanyira 802Quit's online portal kuti utore mahara nicotine patches, gum & lozenges>
Dzidza zvakawanda nezve nicotine kutsiva kurapa siya mishonga uye dzimwe sarudzo dzekuti ungaiwana sei>
Info pane Mahara Nicotine Patches, Gum & Lozenges uye Dzimwe Dzinorega Mishonga
Mhuri inowanzo shandiswa yekurega mishonga ndeye nicotine kutsiva kurapa, kunge zvigamba, chingamu uye lozenges. 802Quits inopa izvi MAHARA kune vanhu vari kuyedza kurega fodya uye inovaendesa yakananga kumba kwako. Yemahara kurega mishonga inosvika mukati memazuva gumi ekuraira. Iwe unogona kuwana mahara nicotine zvigamba usati warega zuva rako chero bedzi iwe uine zuva rekurega mukati memazuva makumi matatu usati wanyoresa kuti ugamuchire masevhisi.
Pamusoro pekuraira nicotine zvigamba, chingamu uye lozenges zveMAHARA kubva ku802Quits, wako mupi wezvehutano anogona kupa mamwe marudzi ekurega mishonga. Kana mishonga ikashandiswa pamwechete, inogona kukubatsira iwe kurega uye chengetedza kubudirira. Taura nemupi wako.
Mhando dzekusiya Mishonga
Kana iwe wakamboedza imwe nzira munguva yakapfuura uye ikasashanda, funga kuyedza imwe kukubatsira iwe kurega kuputa kana imwe fodya.
Iwe unogona kuve uine mibvunzo nezve kurega mishonga. Ruzivo muchikamu chino rwunokubatsira kuti unzwisise zvigadzirwa kuti zvikubatsire kurega fodya, e-fodya kana zvimwe zvigadzirwa zvefodya.
Nicotine Replacement Therapy Siya Mishonga
Isa paganda. Yakanakira kushuvira kusingaperi kwekusuwa. Zvishoma nezvishoma zvinoburitsa nicotine muropa rako. Zita rinozivikanwa zita rekuti Nicoderm® chigamba.
Tsenga kusunungura chikakananda. Inobatsira nzira yekudzora zvishuwo. Inokutendera iwe kudzora yako dosi. Zita rinowanzozivikanwa zita rekuti Nicorette® chingamu.
Kuiswa mumuromo kunge chihwitsi chakaoma. Nicotine lozenges inopa zvakanakira gum pasina kutsenga.
Kana iwe uchida kurega neikotini zvigamba uye gamu kana lozenges, pane zvitatu zvingasarudzwa zvekuti ungazviwana sei, zvakadii zvaunowana uye zvazvinotora.
1.Saina ne802Quits uye utore pakati pemasvondo maviri nema2 emaFICOT nicotine patches, PLUS chingamu kana lozenges. Dzidza zvimwe.
2.Kana iwe uine Medicaid uye mushonga, unogona kugamuchira risingagumi maronda akasarudzika enikotini zvigamba uye gum kana lozenges kana anosvika kumavhiki gumi nematanhatu easina kusarudzwa mabhenji pasina muripo kwauri. Kumbira chiremba wako kuti uwane mamwe mashoko.
3.Kana iwe uine imwe inishuwarenzi yekurapa unogona kuwana rusununguko kana yakaderedzwa NRT nemushonga. Kumbira chiremba wako kuti uwane mamwe mashoko.
Kunyora-chete Kusiya Mishonga
Cartridge yakanamatira pamuromo. Inhaling inoburitsa yakatarwa huwandu hwenikotini.
Zvinogona kubatsira mukuderedza kushuva uye kubvisa zviratidzo, sekushushikana uye kusagadzikana. Inogona kushandiswa mukubatanidza nicotine kutsiva kurapa zvigadzirwa sematehwe, chingamu uye lozenges.
Pombi bhodhoro rine nicotine. Zvakafanana neinhaler, pfapfaidzo inoburitsa yakatarwa huwandu hwenikotini.
Inoderedza kuomarara kwekushuva uye zviratidzo zvekusiya-haina nicotine. Inodzidzisa pfungwa yekunakidzwa nefodya. Hazvifanirwe kusanganiswa nemimwe mishonga. Kana iwe uri pamushonga wekushushikana uye / kana kushushikana, bvunza chiremba wako.
Zvinhu zviri pamusoro zviripo nemushonga chete. Tarisa neyefamasi yako neruzivo rwemutengo. Medicaid inovhara kusvika kumavhiki makumi maviri nemana eZyban® uye Chantix®.
Panogona kuve nemhedzisiro kubva pakurega mishonga. Zvimwe zvinokanganisa zvinosiyana kubva pamunhu kuenda kumunhu. Nekudaro, vashoma vanhu (vasingasviki 5%) vanofanirwa kumira kushandisa kurega mishonga nekuda kwemhedzisiro
Kubatanidza Kurega Mishonga
Uri kushamisika kuti mushonga ungakubatsira sei kurega kuputa, kuputa kana imwe fodya? Uri kufunga nezve nicotine chigamba vs. lozenges vs. chingamu? Kuenzaniswa nekuenda kunotonhora turkey, kushandisa zvigamba, chingamu uye lozenges zvinogona zvinoshamisa kuwedzera mikana yako yekubudirira kurega fodya. Asi iwe unogona kusimudzira kusawirirana kwako zvakanyanya nekubatanidza nicotine kutsiva marapirwo, senge chigamba chinoshanda kwenguva refu pamwe neguamu kana lozenges, izvo zvinokurumidza kuita. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kushandisa nicotine chingamu uye zvigamba pamwe chete, kana iwe unogona kushandisa nicotine lozenges uye zvigamba pamwe chete.
Sei? Iyo chigamba chinopa kuyerera kwakadzikama kweicikotini kwemaawa makumi maviri nemana, saka iwe unowana kuita kwenguva refu, kugadzikana kusingagumi kubva kuzviratidzo zvekuregera, senge kutemwa nemusoro uye kusagadzikana. Zvichakadaro, chingamu kana lozenge rinoburitsa shoma nicotine mukati memaminitsi gumi nemashanu, ichikubatsira kugadzirisa mamiriro akaoma uye kuchengetedza muromo wako kubatikana apo iwe uchikwira kunze kwekuchiva.
Ichishandiswa pamwechete, chigamba uye chingamu kana lozenge zvinogona kupa kurerukirwa zvirinani kubva kuchikakanwa pane zvavanogona kana zvichishandiswa vega.
Zvichida iwe uchaona zviratidzo zvekusiya nguva pfupi iwe uchinge wasiya fodya. Zviratidzo izvi ndizvo zvine simba mukati memavhiki maviri ekutanga mushure mekusiya uye zvinofanirwa kuenda munguva pfupi. Kurega zviratidzo zvakasiyana kune wese munhu. Zvimwe zvezvinhu zvakajairika zvinosanganisira:
Kunzwa pasi kana kusuruvara
Kunzwa kushatirwa, kugunun'una kana kuperera
Kutambudzika kufunga zvakajeka kana kuisa pfungwa
Kunzwa kusagadzikana uye kusvetuka
Inononoka kurova kwemoyo
Kuwedzera nzara kana kuwedzera uremu
Unoda Rubatsiro Kurega?
802Quits inopa nzira nhatu dzekukubatsira iwe kurega kuputa mahara: Nefoni, Mune Munhu uye Pamhepo.
Yemahara Yakagadzirirwa Kurega Rubatsiro>